Sheekada Filimka Machine: Mustafa Iyo Kiara Filim Fiican Kuma Aadan Nasiib Xumaa!! - Hablaha Media Network
Sheekada Filimka Machine: Mustafa Iyo Kiara Filim Fiican Kuma Aadan Nasiib Xumaa!!
HMN:- Bollywood-ka mudo dheer ayay xeer u ahayd in shaqsiyaadka caanka ah caruurtooda ay fanka kusoo daraan si ay mihnad kaga dhigtaa,
Hadaba caruurta waalidiintooda fanka awooda ku leh marka ay Bollywood-ka kusoo biiraan labo un midkood ayay noqdaan inay xidigo caan ah noqdaan ama in si dhaqsi ah sidii roobka camal u feeraan!
Hadaba markaan waxaa madasha Bollywood-ka soo galay Mustafa Burmawalla waxaana aabo u ah filim sameeyaha caanka ah Abbas Burmawalla inta badana Abbas waxay isla shaqeeyaan walaalkiis Mastan waana labo filim sameeye oo sameeyeen filimo Classic ah Abbas-Mustan.
Jilaayaasha filimka Machine: Mustafa Burmawalla, Kiara Advani, Ronit Roy iyo Johnny Lever
Machine wuxuu ku saabsan yahay sheeko jaceyl, qayaano iyo tartanka baabuurta, Saira Thapar (Kiara Advani) waa gabbar dadka caawiso kuna nool Waqooyiga Hindiya waxana gabadhaan aragtida kowaad ku jeclaanahayo Ranch (Mustafa Burmawalla).
Ranch (Mustafa Burmawalla) xirfadiisa waxay tahay inuu tartanka baabuurta cayaaro sidoo kalena guusha ayuu saaxiib la yahay.
Saira Thapar (Kiara Advani) madaama ay tahay gabbar caan ah oo soo jiidasho leh hadiyado kala duwan ayaa marwalbo waxaa usoo diraa qof aysan aqoonin waxayna u heesataa qofkaas inuu yahay Ranch (Mustafa Burmawalla).
Laakiin markii dambe waxay ogaanee qofka hadiyadaha usoo diro inuu yahay saaxiibkeeda dadka ugu dhow Raj (Ronit Roy).
Raj markii uu rabay inuu jaceylkiisa u sheegto Saira Thapar (Kiara Advani) gaari ayaa dilaayo isaga iyo wiil kale oo ay saaxiibo yihiin sidoo kalena Saira jecel shil baabuur ayay ku wada dhimanayaan.
Sidaa darteed Saira Thapar (Kiara Advani) oo niyad jabsan waxay aqbaleysaa inay guursato Ranch (Mustafa Burmawalla) oo markii horeba aragtida kowaad gabadhaan ku jeclaaday.
Kadib waxaa xigto in Ranch (Mustafa Burmawalla) uu safar tartanka baabuurta dalka Georgia u aadayo halkaasna wuxuu ku jeclaanaa gabbar qurux badan oo lagu magacaabo Serena Altar (Carla Ruth Dennis).
Kadib Ranch wuxuu la kulmaa Serena Altar (Carla Ruth Dennis) aabaheed Kriss Altar (Dalip Tahil) oo ka dalbanaayo gabadhiisa inuu guursado.
Hadaba Ranch muxuu ka damacsan yahay qoyska uu Georgia kula kulmay sidoo kalena xaaskiisa Saira nolosheeda sidii u xalin doonaa ayaa ah waxa xiga ee filimkaan loo daawan doono ayadoo kiisas badan oo dil ah la isku qabsanaayo.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Machine Iyo Bandhiga Jilaayaasha
Waa nasiib daro in Abbas-Mustan oo sameeyeen filimo Classic ah sida Khiladi, Baazigar, Soldier, Ajanabee, Humraaz, Race, Race 2 ay la imaadeen filim lagu jah wareerayo Machine oo aan wax micno ah xambaarsaneyn.
Sidoo kale Mustafa wuu nasiib daran yahay waayo filim sheekadiisa aad u liidato ayuu hadana qaab jiliin liito la yimid, runtii Mustafa uma diyaarsano inuu atoore noqdo wado dheerna wey sugeysaa.
Kiara Advani filimkeedii kowaad wuxuu ahaa MS Dhoni oo ay door fiican ku yeelatay atirishadaan wey dadaashay laakiin Machine ma ahan filim ku haboonaa hormarkeeda fanka Hindiya madaama sheekadiisa aad u liidato.
Machine waa filimka ugu sheekada liito oo ay sanadkaan Bollywood-ka sameeyeen kaliya goobo qurux badan, baabuur indha qabad ah iyo muusig iska dhex dhexaad u daawo filimkaan.
Laakiin fariintiisa waa mid lagu jah wareerayo mana jiro qof lacagtiisa ku bixin doono filim aan nuxur laheyn daawashadiisa hadana ay caruur yar yar hogaamiye ka yihiin.
Dadka filimada qiimeeyaan sheekada filimka Machine waxay siiyeen 1/5 oo ah in 1 dhibic kaliya uu helay waana sheekada ugu xumeyd ee 2017 la daawado!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Machine: